स्वास्थ्य /जिबनशैली Archives - Kavre Online
मेवा खानुभएको छ ? मेवा बाह्रै महिना पाइने फल हो । मेवा शरीर र स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजन मानिन्छ ।मेवाले पेट, मुटु र छालालाई स्वास्थ्य राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यतिमात्र होइन कतिपय रोगका बिरामीका लागि मेवाले औषधिकै रुपमा समेत काम गर्छ । आज हामी तपाईलाई मेवाले कुन रोगका बिरामीलाई फाइदा गर्छ भनेर जानकारी दिदै छौं । यी रोगमा फाइदाजनक मेवा दाद आएमा तपाईलाई दादको समस्या छ भने काँचो मेवाको टुक्रा काटेर दाद आएको ठाउँमा नियमित लगाएमा दाद ठिक हुन्छ । त्यसका लागि बोटबाट टिपेको ताजा काँचो मेवा प्रयोग गर्नुपर्छ । जिब्रो फुटेमा तपाईको जिब्रो फुटेको छ । यदी जिब्रो फुटेको छ भने मेवाले तपाईको फुटेको जिब्रोलाई निको बनाउन सक्छ । त्यसका लागि काँचो मेवालाई गिलसिरिन मिसाएर जिब्रोमा बिहान र बेलुका लगाउँदा केही दिनमा जिब्रो फुटेको ठिक हुन्छ । डंडीफोर र चाँया भएमा काँचो मेवाले तापईको छालामा हुने स
काठमाडौं– जाडो मौसम होस् या गर्मी मौसम नै किन नहोस् मानव शरीरका लागि पानी पहिलो प्राथमिकता हो ।हामीलाई लाग्ने अधिकांश रोगहरु पानीका कारण लाग्ने गर्दछन् । पानी पिउँदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । अझ खाली पेटमा पानी पिउँनु स्वास्थ्यका लागि धेरै राम्रो हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।वरिष्ठ पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डा. सन्दीपराज कुँवर भन्छन्– ‘यदि मानिस स्वस्थ रहने हो भने पहिले पेटलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ ।’ मानिसका अधिकांश रोग खानपानबाटै उब्जिन्छन् । पेटलाई सबै कुरामा बचाउने हो भने अधिकांश प्राणघातक रोगबाट बच्न सकिने उनको भनाइ छ ।पेट स्वस्थ्य बनाउन बिहानै मनतातो पानी पिउनु अमृत समान हुन्छ । खाली पेट पानी खाँदा स्वास्थ्यमा फाइदा हुने तथ्य सर्वप्रथम जापानमा प्रमाणित भएको हो । प्राय जापानीले बिहान उठ्नेवित्तिकै चार गिलास पानी खान्छन् । पानी खाएको आधा घन्टापछि मात्र ब्रेकफास्ट लिन्छन् । यो व
रायोको सागसँग जो कोही परिचित हुन्छन् । साग नरुचाउने सायदै नहोलान् । साग खाँदा भिटामिन पाइन्छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । अहिले रायो साग पाइने मौसम हो। जाडो मौसममा सजिलै उपलब्ध हुने, चाँडो पाक्ने र स्वादिलो पनि हुने भएकाले रायोको सागको तरकारी लोकप्रिय मानिन्छ । रायोका साग बढी पोषणयुक्त तरकारीमा रायो पर्छ। यो स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि अत्यन्त लाभदायक छ। के के फाइदा हुन्छ ? रायोको सागमा भिटामिन ए प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। रतन्धो, पुरानो बाथ, कफ आदिबाट बच्न याे अत्यन्त उपयोगी हुन्छ।यसमा पाइने फोलिक र म्याग्नेसियमले मानव शरीरमा रहने विभिन्न विकारयुक्त वस्तुलाई बाहिर निकाल्छ।रायोको सागमा भिटामिन के प्रचूर मात्रामा पाइने भएकाले गर्भवतीलाई खुवाउँदा फाइदा हुन्छ।जाडोमा बाथका रोगीलाई हड्डी दुख्ने समस्या हुन्छ। रायोमा पाइने कपरले यो समस्यामा फाइदा पुर्याउँछ।रायो भिटामिन सीको पनि राम्रो भए
तुलसीको प्रयोग– मुटुरोगीदेखि पत्थरीसम्मका बिरामीलाई फाइदा
आज हरिबोधिनी एकादशी । घरघरमा तुलसीको पुजा आरधना गरिन्छ । हिन्दुहरुले आफ्नो घरमा मठ बनाएर असारमा तुलसी रोप्ने आजको दिन विवाह गर्ने गरिन्छ । सत्य युगमा सती नारी वृन्दाको श्रापका कारण विष्णु वनस्पति झार तुलसीको रूपमा परिणत भई उपर्युक्त मानव जीवनमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिका साथ आसीन भएको भन्ने विश्वास समेत रहेमो छ । युगौदेखि धार्मिक महत्व बोकेको तुलसीको औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ ।तुलसीमाको पात, हाँगा, फूल, जरा, बिउले स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । आयुर्वेदिक चिकित्सामा तुलसीको प्रयोग हुने गरेको छ । यस्तो छ तुलसीले स्वास्थ्यलाई पुग्ने फाइदा तुलसी सेवन गर्दा भोक जगाउँछ–तलुसीको सेवनले पाचनप्रणलीमा सुधार ल्याउने गर्छ । जसले मानिसलाई भोक जगाउँछ । भोक नलाग्ने समस्या भएका व्यक्तिलाई तुलसीको पात सेवन गर्नु उपउक्त हुन्छ । माइग्रेनमा राहत–तुलसीको पातलाई दूधमा उमालेर पि
भोजन ग्रहणका केही संस्कृति रहेका छन् । हातले गरिने भोजन, काँटा वा चम्चाले गरिने भोजन वा चपिस्टिकले खाइने खाना ।नेपाल लगायत भारत वा दक्षिण एसियाली मुलुक लगायतका देशमा परापूर्व कालदेखि खाना विशेष गरि भात खाँदा पाँच औंलाको प्रयोग हुने गरेको छ । तर पछिल्लो चरणमा हातले खाना खान घिन मान्ने र चम्चा वा काटाको प्रयोग गर्ने नयाँ पुस्ताको संख्या बढ्दो छ ।भात मुछेर हातले खाने पुस्तामाथि नयाँ पुस्ताले खिसि टिउरी गर्ने नभएका पनि होइनन् । यसबाट तपाईले लाज मान्ने गर्नु भएको छ भने पनि पिर नगर्नुहोस् । हातले मुछेर खाने खाना पूर्वीय संस्कृतिको हिस्सा मात्र नभएर वैज्ञानिक पनि रहेको छ ।हात फोहर भएको अवस्थामा चम्चाको प्रयोगलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन । तर हात सफा गरेर खाना खाँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । आयुर्वेदका अनुसार खाना पाँच औंलाको संगमबाट बन्ने मुद्राले स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्छ भने पाचन प्रकृया
काठमाडौं। केराको फाइदाको बारेमा तपाईले धेरै सुनेको पढेको हुनुहुन्छ होला । केरामा पोषक तत्व पाइन्छ । यसको सेवन गर्नाले हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदा गर्छ । आयुर्वेदमा केराको सेवनलाई ऊर्जावर्धक र बलवर्धकको रूपमा वर्णित गरीएको छ ।यदि तपाई केरा खानुहुन्न भने पनि यसको सेवन गर्न सुरु गर्नुहोस् । आज हामी तपाईलाई केरा कसरी खाने भनेर बताउन गैरहेका छौ । यो तरीका अरुभन्दा फरक छ । शायद तपाइले यस्तो कहिल्यै पनि गर्नु भएको छैन । बेलुका सुत्नुभन्दा पहिला केरा उमालेर खानाले तपाईले केहि दिनमै यसको प्रभाव देख्न थाल्नु हुनेछ । केहि मान्छेहरु तौल बढाउन पनि केराको प्रयोग गर्छन् ।अब हामी तपाईलाई केराको औषधीय प्रयोगको बारेमा बताउदैछौ। यो प्रयोग धेरै सजिलो र लाभदायक रहने छ । यदि तपाईलाई रातमा निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ भने केराको सेवनले तपाईको लागि फाइदाजनक साबित हुनेछ । केरामा पाइने क्याल्सियमले तपाईको शरीरमा ब
स्वास्थ्यको लागि धेरै किसिमले फाइदाजनक छ । नीम, हाम्रो शरीर, छाला तथा कपालको लागि अत्यन्तै फाइदाजनक औषधि हो । तर यसको तितो स्वादले गर्दा प्रायले यसको सेवन गर्न मनपराउदैनन् ।यसको रस को सेवन गर्न सजिलो हुने हुदा, त्यहि रस सेवन गरेर नीममा पाइने धेरै गुणहरुको फाइदा लिन सकिन्छ । १. ज्वरो आएमायदि शरीरमा मन्द ज्वरो सदा रहि रहन्छ र अन्य कुनै औषधिले पनि छोएन भने १ चम्चा निमको बोक्रा भित्रको छाला २ गिलास पानीमा पकाउनु होस्, आधा गिलास भए पछि बिहान खाली पेटमा नियमित खाने गर्नुस, जस्तो पुरानो जरो पनि केही हप्तामै ठीक हुन्छ । २. औलोको ज्वरोमा नीमको बोक्रा, कुटकी, सुठो र मरिच सबै बराबर मिसाएर चूर्ण बनाउने । एक चौथाँइ चिया चम्चा मनतातो पानीसँग बिहान बेलुका सेवन गरे औलाको ज्वरो पनि बिस्तारै निको हुँदै जान्छ । ३. कपाल दुखेकोमा नीमको ताजा पातको रस निकालेर २-२ थोपा नाकमा हालेमा टाउका अनि कपाल दुखेको ठिक
आलु भान्सामा अनिवार्य रुपमा पाइने परिकार हो । आलु, अन्य सागसव्जी, तरकारीमा मिसाएर मात्र नभइ तरकारी बनाएर उसीनेर तारेर आदी विभिन्न तरिकारले पकाउन सकिन्छ ।विश्वभर नै आलुको बढी प्रयोग हुने गरेको छ । अझ नेपाल र भारत लगायतको देशमा त यसको उत्पादन तथा उपभोग बढी हुने गरेको छ । आलूलाई भण्डारण गरेर राख्ने गरिएको छ र यसलाई आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने गरिएको छ । तर यसरी भण्डारण गरिएको आलु प्रयोगले त्यति फाइदा भने पु-याउँदैन । यस्ता केही आलु छन् जसालई प्रयोग गर्दा त्यसले नकारात्मक असर पर्छ । चाहुरि परेको आलु लोमो समय राखेको आलुमा रहेको पानीको मात्र नष्ट भएसँगै आलु चाहुरिन पुग्छ । जसलाई विउको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । आलुलाई धेरै समय राखेरपछि त्यो चाहुरिन्छ, त्यसको टुसा उर्मन थाल्छ । यसैलाई बिऊको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो आलु सेवन गर्दा हानी पुग्छ । यस्तो चाउरी परेको आलुको सेवन गर्दा शरी
एजेन्सी– अमेरिकामा नेसनल रिसर्च सेन्टर फर बायोलोजीको एक अनुसन्धानले बच्चाहरुको टुट्ने दुधे दाँत सँगालेर राखे भविष्यमा धेरै लाभदायी हुन सक्ने देखाएको छ । उक्त अध्ययनमा सानोमा टुट्ने दाँतमा भएको ‘स्टेम सेल’ ले क्यान्सर र मुटुसम्बन्धी रोगको उपचार हुन सक्छ भन्ने देखाएको हो । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार बढी उमेरका मान्छेहरुको तुलनामा बच्चाहरुको दाँत वातावरणमा धेरै समयसम्म सम्पर्कमा नरहने हुनाले खराब भएका हुँदैनन् । दाँतमा भएको ‘स्टेम सेल’ को सहयताले शरीरमा सजिलै नयाँ कोशिका निर्माण गर्न सक्छ । बच्चाहरुका दाँतबाट पाइने स्टेम सेल उपचारका लागि एकदमै राम्रो सावित हुन सक्छ जसले गर्दा ‘बोनम्यारो’ निकाल्नै पर्दैन । दाँतमा रहेको स्टेम सेल को खोज र त्यसमाथि गरिएको शोधकार्य अहिले प्रारम्भिक चरण रहेको छ । तर भविष्यमा यसको मदतले क्यान्सरको उपचारका साथै हृदयघात कम गर्नमा सहयोग गर्न सक्छ । त्यसैगरी दाँतमा
करेसाबारीमा सजिलै उम्रने तथा बिना मलजल पनि सजिलै मौलाउने पुदिनाको सेवन मानव स्थास्थका लागि निकै उपयोगि छ ।औषधीय गुण भरीएको पुदिनाको पातमा विभिन्न रोग निवारण गर्ने क्षमता हुन्छ । पुदिनामा प्रचुर मात्रामा भिटामिन सी हुने भएकाले यसले जस्तै थकित मानिसलाई पनि फ्रेस बनाउने गर्दछ । आजकाल चुईगम, दन्तमन्जन तथा माउथफ्रेसमा समेत पुदिनालाई प्रयोग गरिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा बाहेक तराई र पहाडका क्ष्ँेत्रमा सजिलै पाइने पुदिनाको स्वाद र सुगन्धले भोजनको रुचि बढाउछ । अत्यन्त धेरै औषधीय गुण भएको पुदिनाका निम्न फाइदाहरु छन् : १. नरिवलको तेलसंग पुदिना पिसेर मिश्रण बनाई छाती, नाक र घाँटीमा मालिस गरे श्वासप्रश्वासको समस्या हटेर जानेछ ।२. दमका बिरामीले पुदिनाको पात तातो पानीमा हालेर बाफ लिदा यो अत्यन्तै लाभदायिक हुन्छ ।३. हात, खुट्टा र जोर्नीको दुखाईमा बदामको तेलसंग पुदिनाको केही थोपा मिसाएर मालिस गरे दुख